ओली र महतोको विचित्रको मिलाप - नेपालबहस
ओली र महतोको विचित्रको मिलाप
| १५:३५:५९ मा प्रकाशित
२२ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्ताका लागि कुन हदसम्मको सम्झौता गर्दा रहेछन् भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ–महन्थ–राजेन्द्र समूहसँगको सत्ता गठबन्धन । धेरैलाई पत्याउनै गाह्रो भएपनि ओलीले हिजोबाट सरकारमा ल्याएपछि लुकेका अनेकन पाटाको पटाक्षेप भएको छ । नाकाबन्दीका बेला नो म्यान्सल्याण्डमा सुत्ने राजेन्द्र महतो र चर्काे विरोध गरेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीको मिलन कसरी भयो होला ? कथा गहिरो छ ।
भारतीय दलाल भन्ने आरोप खेप्दै आएको नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य महतोका लागि सहज भएन । तर मधेसी मूलका मानिसलाई नागरिकता दिनु भनेको रानीको जन्मोत्सवमा केटाकेटीलाई चकलेट बाँड्नु जस्तो भन्ने ओली भने महन्थ ठाकुरका सर्वप्रिय बनेका छन् । आखिर यो चमत्कार कसरी भयो त भन्दा उही सामन्त गोयलसँगको भलाकुसारीले बनाएको बलियो पुलले काम गरेको बुझ्न कठिन भएन ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्का भन्छन्–ओलीमा देखिएको यो राप र तापको रहष्य अब नेपाली जनताले प्रष्ट बुझेका छन् । राष्ट्रवादी मुखुण्डो पनि च्यातिएको छ । राजनीतिमा सबै सम्भव हुन्छ भन्ने कहावत सधैं लागू होला त? भन्ने प्रश्नको उचित जवाफ ओली – महन्थ गठबन्धनले दिएको छ । समय आएपछि भेडा भेडाकै बथानमा जान्छ भने बाख्रा आफ्नै बथानतिर लम्किन्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश समेत यो गठबन्धनले दिएको उनी बताउँछन् ।
एमालेका नेता भीम रावलले पनि ओली र महतोहरुको गठजोडका पछाडि नेपथ्यमा रहेको त्यही शक्तिले काम गरेको बताएका छन् । त्यसबापत अब नेपालको प्राकृतिक सम्पदाका रुपमा रहेको चूरे पनि सखाप पार्न ओली सहमत भएको उनको आरोप छ । सत्ताका लागि जस्तोसुकै नाली खान पनि तयार हुने ओली स्वभाव पार्टी भित्र र बाहिरका सचेत नागरिकले बुझिसकेकाले त्यसका विरुद्ध आन्दोलनकै आँधीबेहरी ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ । यही अवस्था रह्यो भने नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र हैसियत नै गुम्नेवाला छ ।
आउने मंसिरमा चुनाव गराउँछु भन्नेले सरकार बलियो बनाउनेतिर लाग्नुपथ्र्याे त ? उनको प्रश्न छ । ओली चुनाव गराउने पक्षमा नरहेको उनको बुझाई छ । मंसिरमा चुनाव नगरेपछि त संविधान त्यसै फेल हुने भयो ,त्यसपछि मधेसी नेताको स्वार्थ पूरा गर्ने नाममा भारतको सेवा गर्ने उनको सोच रहेको नेता रावलले बताए ।
यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि आज बिहानै ट्वीट गर्दै ओली र महतोको गठबन्धनलाई अनौठो यथार्थ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले मधेस विरोधी छवि बनाएका कट्टर राष्ट्रबादी ओली र भारतीय दलालको पगरी गुथेका महतोको केमेष्ट्री कसरी मिलेको रहेछ त्यो छर्लङ्ग भएको उल्लेख गरेका छन् ।
यसैबाट प्रष्ट हुन्छ ओली र महतोको सालनाल कहाँ जोडिएको रहेछ भन्ने बुझ्न –डा. भट्टराईले लेखेका छन् । एकातिर अन्धराष्ट्रवादको नाम दिएर सोझा पहाडी जनता ठग्ने र क्षेत्रीयतावादको चर्काे कुरा गरेर मधेसी जनता ठग्नेहरु अहिले कसरी एकैथलोमा उभिन सफल भए त ? उनको यक्ष प्रश्न छ ।
संविधान जारी गर्दा दीपावलि गर्ने र ब्लाकआउट गर्नेहरुको मिलन कसले र कसरी गरायो ? घाँटी कसरी जोडियो ? डा. भट्टराईले जिज्ञाशा राखेका छन् । नेकपा माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले पनि यसबारे राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन् – हिजो दक्षिणी छिमेकीलाई पनि कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउने भनेर खिसीट्यूरी गर्नेले अहिले साँच्चै त्यसै पो गरेछन् , वाह रे राष्ट्रवाद ।
बाढी प्रभावितको उद्धार र राहतमा जुट्न तरुण दलको निर्देशन ४८ मिनेट पहिले
कार्यकर्तालाई तत्काल उद्धार तथा राहतमा खटिन देउवाको निर्देशन ५ घण्टा पहिले
विषाक्त मदिरा सेवनबाट सर्लाहीमा ८ जनाको मृत्यु ९ मिनेट पहिले
बुधवार यी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरमा घट्यो १५ मिनेट पहिले
पहिरो खस्दा जयपृथ्वी राजमार्ग २ दिनदेखि अवरुद्ध १८ मिनेट पहिले
व्यासमा पहिराेको जोखिममा दुई घर २५ मिनेट पहिले
दोर्दी खोलाले १४ घर बगायो, ५० घर उच्च जोखिममा २७ मिनेट पहिले
बाढीले पक्की पुल क्षति, सडक सम्पर्क टुट्यो ३४ मिनेट पहिले
प्रदेश सरकारको बजेटमा यसपालि घुमौँ कर्णालीको गुरुयोजना ४० मिनेट पहिले
पहिरोले अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने प्रयास ४५ मिनेट पहिले
पहिरोले करिडोर अवरुद्ध ४८ मिनेट पहिले
सडकका किनारामा तरकारी बिक्री गर्दै महिला ५१ मिनेट पहिले
बेनी बजार कटानको उच्च जोखिममा ५५ मिनेट पहिले
साक्षरता कक्षा सञ्चालित विद्यालयमा ‘फोन पाठशाला’ शुरु ४ दिन पहिले
टिकटकमा भाइरल हुन युट्युबेले गरेको अपराध र राउटे युवतीमाथिको बलात्कार ! १ हप्ता पहिले
एक वर्ष बितिसक्दा पनि बनेनन् पहिरो विस्थापितका घर २ हप्ता पहिले
पोखरामा बहिनी एडुकेयर फाउण्डेशनद्वारा राहत वितरण १ हप्ता पहिले
एसएसपी शौरभ निलम्बनमा १ वर्ष पहिले
प्रदर्शनका लागि नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोकियो ४ महिना पहिले
पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्, भाषणमा सुशासन भन्नेले व्यवहारमा देखाऔँ ७ महिना पहिले